प्रभु येशूको आगमन हुनुभन्दा पहिले, फरिसीहरूले प्रायजसो सभाघरहरूमा धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्थे र मानिसहरूको सामु प्रार्थना गर्थे। तिनीहरू धेरै धर्मी देखिन्थे, र मानिसहरूको नजरमा, तिनीहरूले धर्मशास्त्रको उल्लङ्घन हुने कुनै पनि कार्य गर्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यसो भए फरिसीहरूलाई प्रभु येशूले किन श्राप दिनुभयो? तिनीहरूले कुन प्रकारले परमेश्‍वरको अपमान गरे, तिनीहरूले किन परमेश्‍वरको क्रोध भड्काए? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
फरिसीहरूको सारको छानबिन
प्रभु येशूको आगमन हुनुभन्दा पहिले, फरिसीहरूले प्रायजसो सभाघरहरूमा धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्थे र मानिसहरूको सामु प्रार्थना गर्थे। तिनीहरू धेरै धर्मी देखिन्थे, र मानिसहरूको नजरमा, तिनीहरूले धर्मशास्त्रको उल्लङ्घन हुने कुनै पनि कार्य गर्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यसो भए फरिसीहरूलाई प्रभु येशूले किन श्राप दिनुभयो? तिनीहरूले कुन प्रकारले परमेश्‍वरको अपमान गरे, तिनीहरूले किन परमेश्‍वरको क्रोध भड्काए?
“तिमीहरूले पनि किन तिमीहरूका परम्‍पराद्वारा परमेश्‍वरको आज्ञा उल्‍लङ्घन गर्छौ? किनभने परमेश्‍वरले यसो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ, आफ्‍नो बाबु र आमाको आदर गर: र, बाबु वा आमालाई जसले सराप्छ त्यो मारियोस्। तर तिमीहरू भन्छौ, जोसुकैले आफ्‍नो बाबु वा आमालाई यसो भन्‍नेछ, तपाईंले मबाट जे लाभ पाउन सक्‍नुहुन्थ्यो, त्यो उपहार हो; अनि उसले आफ्‍नो बाबु वा आमाको आदर गर्नु पर्दैन, ऊ स्वतन्त्र हुनेछ। यसरी तिमीहरूले आफ्‍नो परम्‍पराद्वारा परमेश्‍वरको आज्ञालाई व्यर्थ तुल्याइदिएका छौ। तिमीहरू ढोङ्गीहरू हौ, यशैयाले यसो भनेर तिमीहरूको बारेमा ठीकै अगमवाणी गरेका थिए, यी मानिसहरू आफ्ना मुखहरूले मात्र मेरा नजिक आउँछन् र तिनीहरूका ओठहरूले मात्र मेरो आदर गर्छन्; तर तिनीहरूका हृदय मदेखि टाढा छ। तर तिनीहरूले व्यर्थमा मेरो आराधना गर्छन्, मानिसहरूका आज्ञाहरूलाई सिद्धान्तको रूपमा सिकाउँछन्” (मत्ती १५:३-९)।
फरिसीहरूले येशूको विरोध किन गरे भनी के तिमीहरू यसको जड जान्न चाहन्छौ? के तिमीहरू फरिसीहरूको सार जान्न चाहन्छौ? तिनीहरू मसीहका बारेमा कल्पनाहरूले भरिएका थिए। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले मसीह आउनुहुन्छ भनी विश्‍वास मात्र गरे, तैपनि जीवनको सत्यताको पछि लागेनन्। त्यसैले, तिनीहरूले आज पनि अझै मसीहको प्रतीक्षा गर्छन्, किनभने तिनीहरूसित जीवनको मार्गको कुनै ज्ञान छैन र सत्यताको मार्ग के हो सो जान्दैनन्। यस्ता मूर्ख, हट्ठी र निर्बुद्धि मानिसहरूले परमेश्‍वरका आशिष्‌ कसरी प्राप्‍त गर्न सक्थे भनी तिमीहरू भन्छौ? तिनीहरूले मसीहलाई कसरी देख्न सक्थे? तिनीहरूले येशूको विरोध गरे, किनभने तिनीहरूले पवित्र आत्माको कार्यको दिशा थाहा गर्न सकेनन्, किनभने तिनीहरूले येशूले बोल्नुभएको सत्यता जानेनन्; यसका अतिरिक्त, तिनीहरूले मसीहलाई पनि बुझेनन्। तिनीहरूले मसीहलाई कहिल्यै नदेखेका, र तिनीहरू मसीहका साथमा नरहेका हुनाले, तिनीहरूले मसीहको सारलाई सम्भावित कुनै पनि साधनहरूले विरोध गरिरहँदा मसीहको नाउँमा मात्रै व्यर्थमा टाँसिरहने गल्ती गरे। वस्तुतः यी फरिसीहरू हट्ठी र अहङ्कारी थिए र सत्यताको पालन गर्दैनथे। परमेश्‍वरप्रति तिनीहरूको विश्‍वासको सिद्धान्त यस्तो थियोः तिम्रो प्रचार जति नै गहन भए पनि, तिम्रो अधिकार जति नै उच्च भए पनि, तिमीलाई मसीह नभनिएसम्म तिमी ख्रीष्ट होइनौं। के यो आस्था उपहासपूर्ण र हाँस्यस्पद छैनन्?
मानिस भ्रष्ट पारिएको छ र शैतानको फन्दामा जिउँछ। सबै मानिसहरू शरीरमा जिउँछन्, स्वार्थी इच्‍छाहरूमा जिउँछन्, र तिनीहरूका बीचमा मप्रति उपयुक्त एक जना पनि छैन। मेरो निम्ति उपयुक्त छु भन्‍ने मानिसहरू छन्, तर त्यस्ता मानिसहरूले अज्ञात मूर्तिहरूको पूजा गर्छन्। तिनीहरूले मेरो नामलाई पवित्र भनी स्वीकार गरे तापनि, मभन्दा विपरीत दिशातर्फ बढ्ने मार्गमा तिनीहरू पाइला चाल्छन्, र तिनीहरूका वचनहरू अहङ्कार र आत्मविश्‍वासले भरिएका छन्। किनभने, जरादेखि नै तिनीहरू मेरो विरुद्धमा छन् र मेरो निम्ति उपयुक्त छैनन्। हरेक दिन, तिनीहरूले बाइबलमा मेरो निसानाहरू खोज्छन् र जथाभाबी “उपयुक्त” खण्डहरू भेट्छन् जसलाई तिनीहरूले अटुट रूपमा पढ्छन् र धर्मशास्‍त्रका रूपमा पाठ गर्छन्। मेरो निम्ति कसरी उपयुक्त हुने सो तिनीहरूलाई थाहा छैन न त मेरो विरुद्धमा खडा हुनु भनेको के हो सो नै तिनीहरूलाई थाहा छ। तिनीहरू खालि अन्धाधुन्ध धर्मशास्‍त्रका खण्डहरू पढ्छन्। तिनीहरूले कहिल्यै नदेखेका र देख्न असक्षम भएका अस्पष्ट परमेश्‍वरलाई बाइबलभित्र सीमित गर्छन् र फुर्सतमा हेर्न यसलाई निकाल्छन्। तिनीहरूले बाइबलको क्षेत्रभित्र मात्रै मेरो अस्तित्वमा विश्‍वास गर्छन्, र तिनीहरूले मलाई बाइबलसँग समान मान्छन्; बाइबलविना म हुँदिन, र मविना बाइबल हुँदैन। मेरो अस्तित्व वा मेरा कार्यहरूलाई तिनीहरूले ध्यानै दिँदैनन्, तर यसको साटो धर्मशास्‍त्रका एक-एक शब्‍दलाई अत्याधिक र विशेष ध्यान दिन्छन्। धर्मशास्‍त्रले भविष्यवाणी नगरेसम्म मैले चाहेअनुसार केही पनि गर्नु हुँदैन भनी धेरैले पनि विश्‍वास गर्छन्। तिनीहरूले धर्मशास्‍त्रलाई अत्याधिक महत्त्व दिन्छन्। के भन्‍न सकिन्छ भने तिनीहरूले वचनहरू र अभिव्यक्तिहरूलाई यति हदसम्‍म महत्त्वपूर्ण देख्छन् कि मैले बोल्‍ने हरेक शब्‍दलाई मापन गर्न र मलाई दोष दिन तिनीहरूले बाइबलका पदहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले खोज्‍ने कुरा मप्रति अनुकूल हुने मार्ग वा सत्यतासँग अनुकूल हुने मार्ग होइन, तर बाइबलका वचनहरूप्रति अनुकूल हुने मार्ग हो, र तिनीहरूले बाइबलसँग नमिल्‍ने जुनसुकै कुरा मेरो काम होइन, जसमा कुनै अपवात छैन भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्। के यस्ता मानिसहरू फरिसीहरूका कर्तव्यनिष्ठ सन्तान होइनन् र? यहूदी फरिसीहरूले येशूलाई दोषी ठहर्‍याउन मोशाको व्यवस्था प्रयोग गरे। तिनीहरूले त्यो समयमा येशूसँग अनुकूल हुने प्रयास गरेनन्, तर तिनीहरूले यति हदसम्‍म व्यवस्थालाई शब्‍द-शब्द गरी लगनशीलताको साथ पछ्याए कि—पुरानो करारको व्यवस्थालाई पालन नगरेको र मसीह नभएको आरोप उहाँलाई लगाएपछि—तिनीहरूले आखिरमा निर्दोष येशूलाई क्रूसमा टाँगे। तिनीहरूको सार के थियो? के तिनीहरूले सत्यताप्रति अनुकूल हुने मार्गलाई नखोज्नु नै थिएन र? तिनीहरू धर्मशास्‍त्रको एक-एक शब्‍दले ग्रस्त भए तर न त तिनीहरूले मेरो इच्‍छालाई ध्यान दिए न मेरो कामका चरणहरू र विधिहरूलाई नै ध्यान दिए। तिनीहरू सत्यताको खोजी गर्ने मानिसहरू थिएनन् तर शब्दहरूमा कठोरतासाथ लाग्ने मानिसहरू थिए; तिनीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने मानिसहरू थिएनन्, तर बाइबलमा विश्‍वास गर्ने मानिसहरू थिए। वास्तवमा, तिनीहरू बाइबलका रक्षा गर्ने कुकुरहरू थिए। बाइबलका रुचिहरूको सुरक्षा गर्न, बाइबलको इज्‍जतलाई कायम राख्‍न, र बाइबलको मर्यादाको संरक्षण गर्न, तिनीहरूले कृपालु येशूलाई क्रूसमा कीला ठोकी मार्ने हदसम्‍म गए। तिनीहरूले बाइबलको प्रतिरक्षा गर्नको खातिर, र मानिसहरूका हृदयमा बाइबलका एक-एक वचनको प्रतिष्ठालाई कायम गर्नको खातिर मात्रै तिनीहरूले यसो गरे। त्यसकारण तिनीहरूले येशूलाई मृत्युदण्ड दिन आफ्‍नो भविष्य र पापबलिलाई त्याग्न नै रुचाए, जसले मृत्युसम्म नै धर्मशास्‍त्रको सिद्धान्तअनुसार गर्नुभएन। के तिनीहरू सबै धर्मशास्‍त्रका एक-एक वचनका दास थिएनन् र?
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “तैँले ख्रीष्‍टसँगको अनुकूलताको मार्ग खोजी गर्नुपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
येशूमाथि फरिसीहरूको न्याय
मर्कूस ३:२१-२२ अनि जब उहाँका मित्रहरूले यो सुने, उहाँलाई समात्‍न तिनीहरू बाहिर निस्के: किनकि तिनीहरूले भने उहाँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुहुन्‍न। अनि येरूशलेमबाट आएका शास्त्रीहरूले भने, त्यससँग बालजिबुल छ, र त्यसले भूतहरूको राजकुमारद्वारा भूतहरूलाई निकाल्छ।
मत्ती १२:३१-३२ म किन तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसका सबै किसिमका पापहरू र ईश्‍वरनिन्दा क्षमा गरिनेछन्: तर मानिसले पवित्र आत्माको विरुद्ध गरेको ईश्‍वरनिन्दा क्षमा गरिनेछैन। र जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा वचन बोल्छ, उसलाई क्षमा दिइनेछ: तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्छ, उसलाई क्षमा गरिनेछैन, न त यस संसारमा, न त आउनेवाला संसारमा।
बाइबलमा, येशू स्‍वयम्‌ र उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा फरिसीहरूको मूल्याङ्कन यस्तो थियो: “तिनीहरूले भने उहाँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुहुन्‍न। … त्यससँग बालजिबुल छ, र त्यसले भूतहरूको राजकुमारद्वारा भूतहरूलाई निकाल्छ” (मर्कूस ३:२१-२२)। प्रभु येशूको बारेमा शास्त्री र फरिसीहरूको न्याय तिनीहरूले अन्य मानिसहरूका वचनहरू अनुकरण गरेर भनेका मात्र थिइन, न त त्यो आधारहीन अनुमान नै थियो—यो प्रभु येशूका कार्यहरूका बारेमा तिनीहरूले जे देखे र सुने त्यसबाट तिनीहरूले निकालेको निष्कर्ष थियो। तिनीहरूको निष्कर्ष बाहिरी रूपमा न्यायको नाउँमा गरिएको जस्तो अनि मानिसको नजरमा त्यो न्यायसङ्गत जस्तो देखिएको भए तापनि, तिनीहरूले जुन अहङ्कारले प्रभु येशूलाई न्याय गरे, त्यो तिनीहरूले समेत सहन कठिन थियो। प्रभु येशूप्रतिको तिनीहरूको घृणाको उन्मत्त ऊर्जाले तिनीहरूको आफ्नै जङ्गली आकांक्षाहरू अनि दुष्ट शैतानिक मुखाकृति, साथै द्वेषपूर्ण स्वभावलाई उजागर गरेको थियो जसद्वारा तिनीहरू परमेश्‍वरको विरोध गर्थे। प्रभु येशूको न्याय गर्दा तिनीहरूले भनेका यी कुराहरू तिनीहरूका पागलपूर्ण आकांक्षाहरू, ईर्ष्या, अनि परमेश्‍वर र सत्यताप्रति तिनीहरूको शत्रुताको कुरूप र द्वेषपूर्ण प्रकृतिबाट प्रेरित थिए। तिनीहरूले प्रभु येशूका कामहरूको स्रोतबारे अनुसन्धान गरेनन्, न त उहाँले भन्नुभएको वा गर्नुभएको कामको सारलाई नै अनुसन्धान गरे। त्यसको साटो, उहाँले गर्नुभएको कामलाई तिनीहरूले उन्‍मादपूर्ण उत्तेजनाको अवस्थामा अनि जानाजानी द्वेष भावनाले आक्रमण र अपमान गरे। यहाँसम्‍म कि उहाँको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा, जुन परमेश्‍वरका आत्मा हो, उहाँलाई जानी-जानी अपमान गरे। तिनीहरूले “उहाँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुहुन्‍न,” “बालजिबुल,” र “भूतहरूको राजकुमार।” भनी भन्‍नुको अर्थ यही हो। भनाइको अर्थ, तिनीहरूले परमेश्‍वरका आत्मालाई बालजिबुल तथा दुष्ट आत्माहरूको राजकुमार हो भनी भने। परमेश्‍वरको देहधारी आत्मा, जसले देह धारण गर्नुभएको थियो, उहाँको कामलाई तिनीहरूले पागलपनको संज्ञा थिए। तिनीहरूले परमेश्‍वरका आत्मालाई बालजिबुल भनेर मात्र निन्दा गरेनन्, तर परमेश्‍वरको कामलाई तिरस्कार गरे अनि प्रभु येशूलाई तिरस्कार र निन्दा गरे। परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको विरोध र निन्दाको सार शैतान तथा दुष्ट आत्माद्वारा परमेश्‍वरप्रति गरिएको विरोध र निन्दाको सारसित पूर्ण रूपले समान थियो। त्यसले भ्रष्ट मानिसहरूलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो तर धेरै हदसम्म, ती शैतानको नै मूर्त रूप थिए। मानवजातिको माझमा तिनीहरू शैतानको माध्यम थिए, अनि तिनीहरू शैतानको मतियार तथा नोकर थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टप्रतिको तिनीहरूको निन्दा र तिनीहरूको बदनामीको सार प्रतिष्ठाको निम्ति परमेश्‍वरसितको तिनीहरूको संघर्ष थियो, परमेश्‍वरसितको तिनीहरूको द्वन्द्व थियो, अनि परमेश्‍वरलाई तिनीहरूले गरेको अन्त्यहीन परीक्षा थियो। परमेश्‍वरप्रतिको तिनीहरूको विरोधको सार तथा उहाँप्रतिको तिनीहरूको शत्रुताको आचरण, साथै तिनीहरूका वचन तथा तिनीहरूका विचारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्‍वरका आत्मालाई निन्दा गरेको र क्रोधित तुल्याएको थियो। यसरी, तिनीहरूले जे भने र गरे, त्यस अनुसार परमेश्‍वरले एउटा उचित न्याय निर्धारित गर्नुभयो, अनि तिनीहरूका कार्यहरूलाई पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको पाप भएको ठहर गर्नुभयो। यो पाप यस संसारमा अनि आउने संसारमा पनि अक्षम्य हुन्छ, जुन कुरालाई धर्मशास्त्रको निम्न खण्डमा प्रमाणित गरिएको छ: “मानिसले पवित्र आत्माको विरुद्ध गरेको ईश्‍वरनिन्दा क्षमा गरिनेछैन,” र, “जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्छ, उसलाई क्षमा गरिनेछैन, न त यस संसारमा, न त आउनेवाला संसारमा।”
इस्राएलमा, “फरिसी” भन्ने शब्‍दलाई एक प्रकारको पदवी-नामको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अहिले किन यो एउटा कलङ्कित उपनाम बनेको छ त? यस्तो किन भयो भने फरिसीहरू एक प्रकारको व्यक्तिका प्रतिनिधिहरू बनेका छन्। यस प्रकारको व्यक्तिका विशेषताहरू के-के हुन् त? तिनीहरूले नारा लाउँछन्, तिनीहरू बहाना बनाउन, आभूषण-सजावट गर्न र साँचो रूप लुकाउनमा माहिर हुन्छन् र तिनीहरूले आफूमा महान् भद्रता, महान् पवित्रता र महान् भलापन, महान निश्पक्षपन र सम्मान भएको बहाना गर्छन्। परिणामस्वरूप, तिनीहरूले अलिकति पनि सत्यता अभ्यास गर्दैनन्। तिनीहरूले कसरी कार्य गर्छन् त? तिनीहरू पवित्र पुस्तकहरू पढ्छन्, तिनीहरूले प्रवचन सुनाउँछन्, तिनीहरूले अरूलाई असल कार्य गर्न, दुष्ट कार्य नगर्न, परमेश्‍वरको प्रतिरोध नगर्न सिकाउँछन् र अरूको अगाडि एकदमै राम्रो व्यवहार गर्छन्, तैपनि जब अरू पछाडि फर्कन्छन् तिनीहरूले भेटी चोर्छन्। प्रभु येशूले तिनीहरूले “भुसुना छान्छन् र उँटलाईचाहिँ निल्छन्” भनी भन्नुभयो। यसको मतलब, तिनीहरूको सबै व्यवहार सतहमा राम्रो देखिन्छ—तिनीहरूले देखाउनको लागि नारा लगाउँछन्, तिनीहरूले उच्च सिद्धान्तहरूको बारेमा बोल्छन्, र तिनीहरूका वचनहरू मीठा सुनिन्छ, तर तिनीहरूका कार्यहरू भने अस्तव्यस्त भद्रगोल, पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरविरोधी हुन्छन्। तिनीहरूको व्यवहार र बाह्य रूप सबै नै बहाना र धोका हुन्; तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूसँग सत्यताप्रति अलिकति पनि प्रेम हुँदैन, न त सकारात्मक कुराहरूको लागि नै प्रेम हुन्छ। तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा गर्छन्, परमेश्‍वरबाट आउने सबै थोकलाई घृणा गर्छन्, र सकारात्मक कुराहरूलाई घृणा गर्छन्। तिनीहरूले केलाई प्रेम गर्छन् त? के तिनीहरूले निष्पक्षता र धर्मीपनलाई प्रेम गर्छन् त? (गर्दैनन्।) तिनीहरूले सकारात्मक कुराहरूलाई प्रेम गर्दैनन् भनेर तिमीहरूले कसरी भन्न सक्छौ? (प्रभु येशूले स्वर्गको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो जसलाई तिनीहरूले अस्वीकार मात्र गरेनन्, बरु तिनीहरूले त त्यसलाई दोषी ठहराउने कामसमेत गरे।) यदि तिनीहरूको दोषी ठहराउने कार्य नभएको भए, के तिमीहरूले यसको बारेमा भन्न सक्नेथियौ त? प्रभु येशू काम गर्न आउनुअघि, के कुराले तिमीहरूलाई तिनीहरूले निष्पक्षता र धर्मीपनलाई प्रेम गर्दैनथे भनेर बताउँथ्यो होला? तिमीहरूले यसको बारेमा बताउन सक्‍नेथिएनौ, सक्‍नेथियौ त? तिनीहरूका सबै व्यवहार बहानाबाजी हो, र तिनीहरूले अरूको भरोसालाई छलसाथ जित्नको लागि असल व्यवहारको बहानाको प्रयोग गर्छन्। के यो ढोङ्ग र छल होइन र? के त्यस्ता धोकेबाजहरूले सत्यतालाई प्रेम गर्न सक्छन् र? तिनीहरूको यो असल व्यवहारपछाडि लुकेको उद्देश्य के हो त? तिनीहरूको उद्देश्यको एक भागचाहिँ अरूलाई ठग्नु हो; अर्को भागचाहिँ अरूलाई धोका दिनु, तिनीहरूको भरोसा जित्नु र तिनीहरूद्वारा आराधना गरिनु, र ‍अन्त्यमा इनाम प्राप्त गर्नु हो। त्यत्रो ठूलो ठगीलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि तिनीहरूको तरिका कति धेरै चलाकीपूर्ण हुनुपर्छ त? त्यसो भए, के त्यस्ता मानिसहरूले निष्पक्षता र धर्मीपनलाई प्रेम गर्छन् त? अवश्य पनि गर्दैनन्। तिनीहरूले हैसियतलाई प्रेम गर्छन्, तिनीहरूले ख्याति र धनलाई प्रेम गर्छन्, र तिनीहरू इनाम पाउन चाहन्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूका निम्ति दिइएका परमेश्‍वरका वचनहरूलाई बिलकुलै अभ्यास गर्दैनन्। तिनीहरू अलिअलि पनि ती वचनहरूअनुरूप जिउँदैनन्; तिनीहरूले मानिसहरूलाई छल्न र तिनीहरूको भरोसा जित्न, तिनीहरूको आफ्नै हैसियत र मान-सम्मान बढाउन केवल आभूषण र भेषको प्रयोग गर्छन्। यी कुराहरू सुरक्षित भएपछि, तिनीहरूले त्यसलाई पुँजी र आय स्रोत प्राप्त गर्न प्रयोग गर्छन्। के यो घृणास्पद छैन र? तिनीहरूको यी सबै व्यवहारहरूमा के देखिन्छ भने, सत्यतालाई प्रेम नगर्नु नै तिनीहरूको सार हो, किनभने तिनीहरूले सत्यतालाई कहिल्यै पनि अभ्यास गर्दैनन्। तिनीहरूले सत्यतालाई अभ्यास गर्दैनन् भन्‍ने कुराको चिन्ह के हो त? सबैभन्दा ठूलो चिन्ह यही हो: प्रभु येशू काम गर्न आउनुभयो र उहाँले भन्नुभएका हरेक कुरा सही थिए र उहाँले भन्नुभएका हरेक कुरा सत्यता थिए। तिनीहरूले त्यसलाई कसरी लिए त? (तिनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।) के तिनीहरूले प्रभु येशूका वचनहरूलाई गलत भएको विश्‍वास गरेको कारण स्वीकार गरेनन् कि तिनीहरूले ती वचनहरूलाई सही छन् भन्ने जानेर पनि स्वीकार गरेनन्? (तिनीहरूले ती वचनहरूलाई सही छन् भन्ने जानेर पनि स्वीकार गरेनन्।) अनि के कुराले यस्तो गरायो त? तिनीहरूले सत्यतालाई प्रेम गर्दैनन्, र तिनीहरूले सकारात्मक कुराहरूलाई घृणा गर्छन्। प्रभु येशूले भन्नुभएका सबै कुरा सही थिए, तिनमा कुनै त्रुटि थिएनन्, अनि तिनीहरूले प्रभु येशूका वचनहरूमा उहाँको विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने कुनै कुरा फेला पार्न नसके पनि, तिनीहरूले उहाँलाई दोष दिए र त्यसपछि षडयन्त्र गरे: “उहाँलाई क्रूसमा टाँगे। यो कुरा कि त उहाँ कि त हामी भन्ने हो।” यसरी तिनीहरूले आफैलाई प्रभु येशूको विरुद्धमा उभ्याए। तिनीहरूले प्रभु येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने विश्‍वास नगरे पनि, उहाँ असल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले न त नियम-कानुन न त यहोवाका[क] व्यवस्थाहरू नै उल्लङ्घन गर्नुभयो; किन तिनीहरूले प्रभु येशूलाई दोष दिए त? तिनीहरूले किन प्रभु येशूलाई त्यसरी व्यवहार गरे त? यो कुरालाई यी मानिसहरू कति दुष्ट र बद्ख्वाइँपूर्ण थिए भन्ने तथ्यमा देख्न सकिन्छ—तिनीहरू चरम रूपमा दुष्ट थिए! फरिसीहरूको उदाङ्गो भएको दुष्ट अनुहारको हद तिनीहरूको दयालुपनको आवरणको हदभन्दा फरक हुन सकेको थिएन। धेरै मानिसहरू छन् जसले तिनीहरूको साँचो अनुहार कुन हो र कुन चाहिँ झूटो हो भनी भेद छुट्ट्याउन सक्दैनन्, तैपनि प्रभु येशूको देखा पराइ र कामले ती सबैलाई खुलासा गरिदियो। फरिसीहरूले कसरी आफूलाई बाहिरी भेषमा लुकाउँछन्, बाह्य रूपमा तिनीहरू कति दयालु देखिन्छन्—यदि यी तथ्यहरूलाई खुलासा नगरिएको भए, कसैले पनि तिनीहरू वास्तवमा के हुन् भनी देख्न सक्नेथिएनन्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूको “परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग सत्यताको अभ्यास गर्नु हो” बाट उद्धृत गरिएको
— ख्रीष्ट विरोधीहरूको पर्दाफासको “तिनीहरू दुष्ट, धूर्त, र छली हुन्छन् (भाग तीन)” बाट उद्धृत गरिएको
अघिल्लो: धार्मिक संसारका पाष्टरहरू र एल्डरहरू सबैले बाइबल राम्ररी जान्दछन् र प्रायजसो अरूलाई त्यसको व्याख्या गर्छन्, मानिसहरूलाई बाइबलको पालना गर्न लाउँछन्। यसो गर्दा, के तिनीहरूले प्रभुलाई उचाल्दैनन् र प्रभुको गवाही दिँदैनन् र? तिनीहरूले मानिसहरूलाई धोखा दिइरहेका छन्, तिनीहरू पाखण्डी फरिसीहरू हुन् भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?